Bambo-gacmeed ayeey noqotay qalabkii lagu qarxiyey Masaajidka Daar Al Faaruuq -
Waaxda sirdoonka ee FBI-da oo iyagu la wareegay baaritaanka la xiriira qaraxii lala beegsadday Masaajidka Daar Al – Faaruuq ayaa sheegay in ay ku raad jiraan, baaritaan ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen dadka mas’uulka ka ah qalabka lagu tuuray masaajidka ee qarxa masaajidka ka dhaliyey.
Sarkaal kamid ah FBI-da ayaa warbaahinta CBS News u sheegay in qaraxa lala beegsadday masaajidka uu ahaa qalab nooca bam-gacmeedka ah.
Saraakiisha FBI-da ayaa sheegaya in qalabka ama bambadda lagu tuuray maajiska ay tahay aallad casri ah oo muujisay in ay aad halis u ahayd, qalab ahaana in ay ka badan tahay intii la filayay.
FBI-da ayaa hogaaminaysa baaritaanka loogu jiro cidii ka danbeysay falkan argagixiso ee loo geeystay masaajidka iyo Xarunta Dar Al Faaruuq.
Qalabka dhismaha masaajidka lagu tuuray ee bambadda ah ayaa muujiyay “tafaasiil dheeraad ah” intii la filayay ka badan, kana daran, sida ay sheegeen mas’uuliyiinta FBI-da ee iyagu baaritaanka gacanta ku haya.
Qaar kamid ah hogaamiyeyaasha iyo mas’uuliyiinta laga soo doorto gobolka Minnesota oo uu kamid yahay Guddoomiye Mark Dayton ayaa ka hadlay, cambaareeyna ka bixiyey fal danbiyeedkan lala beegsadday masaajidka. “Waa fal argagixisanimo, fal dambiyeed argagixisanimo ku saleysan”, ayuu yiri Guddoomiye gobolka Minnesota ee Mark Dayton.
Laakiin Keith Ellison, D-Minnesota, oo matala deegaanka deriska ah oo uu yahay muslimiin naftiisa ah, ayaa sheegay in uu ka walwalsan yahay qayb ka mid ah qaabka dulqaad la’aanta sii kordheysa.
Sidoo kale mas’uulin ay kamid yihiin xildhibaan Ilhaan Cumar iyo Keith Ellison ayaa oo iyagu ah hogaamiyeyaal Muslimiin ah oo gobolka Minnesota laga soo doorto ayaa falkan dhaleeceeyay, wax aad looga xumaadana ku tilmaamay.
Abaalmarin $ 24,000 dhan ayaa waxaa bixiya ururo Muslimiin ah, waxaana abaalmarintan lacagta ah la siinayaa qofkii soo sheega wax macluumaad ah oo ku saabsan qaraxan lala beegsadday masaajidka Dar Al Faaruuq.
Baaritaanka la xiriira qaraxa argagixiso ee loo geystay masaajidka ayaa wali socda, wixii warbixin dheeraad ah ee ku soo kordhana kala soco Tusmo Times.
Xigashadda sawirrada: AP iyo AlJazeera